डा. गोविन्द केसी समेत आन्दोलनमा, संविधान रक्षाका लागि सडकमा आएको दाबी « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » डा. गोविन्द केसी समेत आन्दोलनमा, संविधान रक्षाका लागि सडकमा आएको दाबी
डा. गोविन्द केसी समेत आन्दोलनमा, संविधान रक्षाका लागि सडकमा आएको दाबी
nepaltube Published On :9January, 2021
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा विभिन्न अभियन्तासँगै डा. गोविन्द केसी समेत आन्दोलित हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशभर भएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलन गर्दै आएका डा. केसी पनि सहभागी भएका हुन् ।
डा.केसी नागरिक अगुवाको आह्वानमा भएको प्रदर्शनमा माइतिघरमा पुग्नुभएको थियो । संसद विघटन गरेर सरकारले निरंकुश काम गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा सहभागी भएको डा. केसीले बताउनुभयो । संसद पुनस्थापना गरेर संविधानको रक्षाका लागि आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने केसीको दाबी थियो ।